अस्वस्थ जीवनशैलीले मोटोपना बढ्दै | Nagarik News - Nepal Republic Media
१६ मंसिर २०७४ ९ मिनेट पाठ
फूर्तिलो शरीर देख्दा जो कोही पनि आकर्षित हुन्छन् नै । यस्तो शरीर भएका मानिसको जीवन पनि स्वस्थ हुन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा मोटोपना समस्याले विकराल रूप लिँदै छ । ‘बालबालिकादेखि युवा र पाका उमेर समूहमा मोटोपनाको तीव्र रूपमा बढेको छ,’ अल्का अस्पतालका इन्डोक्राइनोलोजिस्ट डा. अंशुमाली जोशीले भने, ‘उपचारमा आउने बिरामीमा गलत जीवनशैली अपनाउँदा मोटोपना देखिएको छ ।’ मोटोपना हुनु रोगको खानी भएकाले यसबाट बच्न उनको सुझाव छ ।
टिचिङ काठमाडौं मेट्रो अस्पतालकी इन्डोक्राइनोजिस्ट डा. ज्योति भट्टराईले पनि दैनिक औसत चार जना मोटोपनाका मात्र बिरामी हेर्ने गरेको बताइन् । उनले दैनिक ६० जना बिरामी हेर्छिन् । ती सबै मोटोपनासँग सम्बन्धित रोगका छन् । उनका अनुसार पहिला ‘खान्दानी’ परिवारमा देखिने मोटोपना अहिले बालबालिका, महिला र विपन्न परिवारमा समेत देखिएको छ । यसको परिणाम ‘टाइप टु मधुमेह’ (सानै उमेरमा हुने मधुमेह) नै देखा परेको उनले बताइन् । ‘पाको उमेरमा हुने प्रकारको मधुमेह १७ वर्षमै देखिएको छ,’ उनले भनिन् । नेपालमा मोटोपनाको अवस्थाबारे अध्ययन नभएकोले यकिन तथ्यांक पाउन सकिँदैन ।
‘पाकामा टेबुलवर्क गर्ने, स्कुलबाट गएका बालबालिका घरमा पुगेपछि पनि बसेरै खेलिने खेल खेल्ने, टेलिभिजनमा कार्टुन हेर्ने, टयाब्लेटमा खेल्ने गर्नाले शारीरिक व्यायाम पुग्दैन,’ डा. जोशी भन्छिन् ।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७४ ०८:२४ शनिबार